पीपीसीको बारेमा Semalt र यसले तपाईंको वेबसाइटको लागि के अर्थ राख्छ
यद्यपि तपाईंको वेबसाइटको मार्केटिंग रणनीति विचार गर्दा पीपीसी तातो विषय हो। पीपीसी मार्केटिंग रणनीतिको बारेमा तपाईलाई धेरै थाहा छ वा छैन, यदि तपाई यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाई अझ बढी जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ। यदि तपाईंलाई कहाँ सुरु गर्ने थाहा छैन भने, Semalt सही जानकारी हो सबै जानकारीहरू पाउनको लागि तपाईले प्रभावकारी पीपीसी अभियान चलाउनको लागि।
सेट अप गर्नु अघि, हामीले पीपीसीको आधारभूत कुरा सिक्नुपर्दछ। PPC परिभाषित गरेर सुरु गरौं।
पीपीसी भनेको के हो?
पीपीसीको मतलब भुक्तान-प्रति-क्लिक हो, जुन इन्टरनेट मार्केटिंगको एक मोडल हो जहाँ विज्ञापनदाताहरू प्रत्येक पटक उनीहरूको गधामा क्लिक हुँदा एक शुल्क दिन्छन्। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यो तपाईंको साइटमा ट्राफिक खरीद गर्ने एउटा तरिका हो जहाँ तपाईं केवल भुक्तानी गर्नुहुन्छ यदि तपाईंको लिंक क्लिक भयो भने। यदि तपाईं जति सक्दो चाँडो सब भन्दा बढी ट्राफिक प्राप्त गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, यो प्राप्त गर्ने यो एउटा तरिका हो, ती क्लिकहरूलाई जैविक रुपमा "कमाउन" को प्रयासमा राख्नु भन्दा।
खोज इन्जिन विज्ञापन पीपीसी को सबैभन्दा लोकप्रिय रूप मान्न सकिन्छ। यो किनभने वेबसाईट विज्ञापनदाताहरु लाई खोज इन्जिनको प्रायोजित लिंकहरुमा विज्ञापन प्लेसमेन्टको लागि बिड गर्न अनुमति दिँदछ। यो तब देखिन्छ जब प्रयोगकर्ताले उनीहरूको ब्यापार अफरमा सम्बन्धित कुञ्जी शब्दमा खोजी गर्दछ, र SERP मा एक कार्बनिक स्थितिको लागि लडाई भन्दा; तपाईं माथि आफ्नो स्थान किन्नुहोस्।
पीपीसी मार्केटिंगको आधारभूत कुराहरू सिक्दै
प्रत्येक पटक पीपीसी विज्ञापन क्लिक गरियो, यसले एक वेबसाइटमा आगन्तुकहरूलाई पठाउँदछ। यो वेबसाइट विज्ञापन र पीपीसी अभियानको मालिक हो जुन तपाईले क्लिक गर्नुभयो। पीपीसीको साथ विज्ञापनका अन्य प्रकारहरू जस्तो नभई, तपाईले प्रत्येक क्लिकको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ जुन उनीहरू ग्राहकहरुमा रूपान्तरण गर्छन् कि हुँदैन। पीपीसी सबै भन्दा राम्रो विज्ञापन "योजनाहरू" मध्ये एक हो किनकि तपाइँले विज्ञापनको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुन्न र कुनै क्लिकमा अन्त हुनुहुन्न। जहाँसम्म, यदि सही भयो भने, तपाईं ती विज्ञापनहरू प्रायोजित गर्न खर्च गरेको भन्दा बढी बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने place १० खर्च विज्ञापन स्थानको लागि भुक्तान गर्न तर $ १,००० को रूपान्तरण प्राप्त गर्न, तपाइँले मोटो नाफा बनाउनुभयो।
यद्यपि, विजयी पीपीसी अभियान निर्माण गर्नु सजिलो छैन जस्तो देखिन्छ। सही खोजशब्दहरू पाउनको लागि यसले धेरै अनुसन्धान र योजना लिन्छ, रूपान्तरणहरूको लागि अनुकूलित पीपीसी अवतरण पृष्ठ सेटअप गर्नु अघि यी कुञ्जी शब्दहरूलाई व्यवस्थित अभियान र विज्ञापन समूहमा व्यवस्थित गर्दै।
खोज इञ्जिनहरूले यी विज्ञापन योजनाहरू चलाउनबाट धेरै पैसा कमाउँछन् र वेबसाइट विज्ञापनदाताहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छन् जुन प्रासंगिक, बौद्धिक लक्षित भुक्तान-प्रति-क्लिक अभियानहरू सिर्जना गर्दछ। तिनीहरूको विज्ञापन क्लिकको लागत घटाएर तिनीहरूले त्यसो गर्छन्। यसको मतलव तपाईंको विज्ञापन अभियान राम्रो हुन्छ, तपाईं कम खर्च गर्नुहुन्छ र अधिक रूपान्तरणहरू तपाईंले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो कुनै पनि खोज इञ्जिन विज्ञापनदाताका लागि अन्तिम पुरस्कार हो। यदि तपाईंको विज्ञापन र ल्यान्डि pages पृष्ठहरू गुगलले प्रयोगकर्ताहरूलाई अत्यन्त उपयोगी र सन्तुष्ट मान्दछन्, खोजी ईन्जिनले तपाईंलाई यी क्लिक्सहरूलाई छुट ब्याज दरमा अधिक लाभ दिन निम्त्याउँदछ। त्यसोभए यदि तपाइँ पीपीसी प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँले यसलाई ठीक तरीकाले पूरा गर्नुपर्नेछ।
गुगल विज्ञापन के हो?
गुगल विज्ञापनहरू, जुन पहिले गुगल एड्वर्डहरूको रूपमा चिनिन्थ्यो, विश्वव्यापी रूपमा एकल सबैभन्दा लोकप्रिय पीपीसी विज्ञापन प्रणाली हो। यस विज्ञापन प्लेटफर्मले अनलाइन व्यवसायलाई विज्ञापनहरू सिर्जना गर्न सक्षम गर्दछ जुन गुगल सर्च ईन्जिन र गुगलसँग सम्बद्ध अन्य सम्पत्तीहरूमा देखाउँदछ।
गुगलको विज्ञापन प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले विज्ञापन स्थानको स्थितिका लागि कुञ्जी शब्दहरूमा बिड लगाउँदछन्। यसले Google लाई विभिन्न विज्ञापनहरूको विभिन्न प्रकारका प्राथमिकता प्रस्ताव गर्न सम्भव बनाउँदछ धेरै विज्ञापनदाताहरू राख्न इच्छुक छन्। यो बिडिंग प्रक्रिया Google लाई प्राथमिकता तय गर्न को लागी केहि अत्यधिक भुक्तान गर्ने विज्ञापन र कम-तिर्नेलाई कम ध्यान दिईन्छ। जब कुनै खोजी सुरु हुन्छ, गुगलको खोज एल्गोरिथ्मले विज्ञापनको व्यस्त घारमा डुब्दछ र धेरै कारकहरू विचार गर्दै विजयीहरूको सेट छान्छ जुन विज्ञापनको लागि उपलब्ध सिमित स्थान भर्न सबैभन्दा उपयुक्त विज्ञापनहरू निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। "विजेताहरू" छनौट गर्नको लागि गुगलले यसको कुञ्जी शब्दहरूको गुणस्तर र प्रासंगिकता र उनीहरूको कुञ्जीशब्द बिडहरूको आकार जस्ता कारकहरूलाई विचार गर्नुपर्नेछ, केहि नामहरू बताउनको लागि।
गुगलले विज्ञापनदाता विज्ञापन रै R्कका लागि पनि नजर राख्छ। यो एक मेट्रिक हो जुन दुई मुख्य कारकहरू जस्तै सीपीसी बिड (जहाँ सब भन्दा धेरै तिर्ने विज्ञापनदाताले पहिलो स्थान जित्छ) र गुण स्कोर (जहाँ गुगल क्रलरले पत्ता लगाउँदछ कि कुन विज्ञापन अभियान सबैभन्दा राम्रोसँग कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोगको साथ उत्तम हुन्छ भन्ने गुणा गरेर गणना गरिन्छ। क्लिक-थ्रु रेट, प्रासंगिकता, र ल्यान्डि page पृष्ठ गुण)।
यस प्रणालीले विज्ञापन विजेताहरूलाई सम्भावित ग्राहकहरुमा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ मूल्यमा जुन कि कुनै महँगो छैन। एक उत्कृष्ट विज्ञापन अभियान र एक उपयुक्त विज्ञापन बिड राखेर, तपाइँले आफ्नो विज्ञापनको विशेष रुप पाउने सम्भावनालाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्नुहुन्छ।
तपाईको पीपीसी मार्केटिंगका लागि गुगल प्रयोग गर्नु सायद तपाईको वेबसाइटको लागि उत्तम निर्णय हो। यो किनभने गुगल यस ग्रह मा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको र प्रयोग गरिएको वेबसाइट हो। गुगलले धेरै मात्रामा ट्राफिक पाउँदछ, त्यसैले तपाइँको विज्ञापन उनीहरूको वेबसाइटमा फिचर गरिएको अर्थ तपाइँ तपाइँको विज्ञापनमा सबैभन्दा प्रभावशाली क्लिकहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको वेबसाइटमा अधिक ट्राफिकमा अनुवाद हुन्छ र आशा छ, ग्राहकहरुमा आगन्तुकहरुको अधिक रूपान्तरण।
यद्दपि, आवृत्ति वा तपाईंको विज्ञापनहरू देखा पर्ने संख्यामा निर्भर गर्दछ कुन कुन कुञ्जी शब्दहरू र मिलान प्रकारहरू जुन तपाईं आफ्नो विज्ञापन सेटअप गर्दा छनौट गर्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जसले तपाईंको पीपीसी विज्ञापन अभियान कती सफल हुनेछ भनेर निर्धारण गर्दछ। अझै, तपाईं ध्यान केन्द्रित गरेर तपाईंको सफलताको संभावना सुधार गर्न सक्नुहुन्छ:
कीवर्ड प्रासंगिकता: एसईओ बाट, हामीले देख्यौं कि प्रासंगिक कुञ्जी शब्द कसरी हुन सक्दछ जब तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको ध्यान प्राप्त गर्ने। प्रासंगिक पीपीसी कीवर्ड सूचीहरू क्राफ्टिंग गरेर, कडा कुञ्जी शब्द समूहहरू सिर्जना गरेर, र उचित विज्ञापन पाठको विकास गरेर, तपाईंले फड चेनको धेरै माथि आफ्नो विज्ञापन राख्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो।
ल्यान्डि Page पृष्ठ गुणः तपाइँको विज्ञापन को उपयोग छैन यदि एक आगंतुक क्लिक गरीन्छ निरुत्साहित गर्न को लागी यो लिंक पूर्ण रूपमा खोलिएको छ। प्रेरणादायक ल्यान्डि pages पृष्ठहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन प्रासंगिक सामग्री बोक्दछ, र एक विशिष्ट कल-टु-एक्शन विशिष्ट दर्शकहरू र खोज क्वेरीहरूमा फिट गर्नको लागि अनुकूल छ।
गुण स्कोर: तपाईं कम-गुणवत्ता कुञ्जी शब्दहरूको लागि जानु हुँदैन, तर यसको सट्टामा, उत्कृष्ट गुणस्तरीय खोजशब्दहरू खोजी गर्न बाध्य हुन्छ। तपाईंको ल्यान्डि page पृष्ठ र पीपीसी अभियानको गुणस्तरले तपाईंको स्थानलाई अन्य स्थानहरूमा तपाईंको स्थानमा प्रभाव पार्छ। विज्ञापनदाताहरूसँग राम्रो गुण स्कोरहरू उच्च राखिएका विज्ञापनहरू, अधिक विज्ञापन क्लिकहरू, र सस्तो दरहरूको साथ समाप्त हुनेछन्।
रचनात्मक: तपाइँको विज्ञापन कत्तिको आकर्षक र आकर्षक छ? यदि तपाईंको विज्ञापन प्रयोगकर्ताहरूको ध्यान आदेश दिन असमर्थ छ, गुगलले विज्ञापन प्लेसमेन्ट स्थिति प्रयोग गरेर कष्ट दिँदैन, कुनै विज्ञापनहरू देखाउँदछ जुन कहिले पनि कुनै क्लिकहरू पाउने छैन। यसले मद्दत गर्दछ यदि तपाईं डिजाइनर-गुणवत्ता विज्ञापनहरू सिर्जना गर्नुभयो जुन क्लिकको माग गर्न पर्याप्त आकर्षक हुनेछ।
पीपीसी कीवर्ड रिसर्च
कुञ्जी खोज अनुसन्धान पीपीसी अनुसन्धानको अधिक समय उपभोक्ता पक्ष हुन सक्छ। जहाँसम्म, तपाईंको सम्पूर्ण पीपीसी अभियानको सफलता तपाईले प्रयोग गर्नुभएको कुञ्जीशब्दहरू ट्राफिक उत्पन्न गर्नमा कसरी प्रभावकारी छन् भन्नेमा निर्मित छ। यसैले किन सबै भन्दा सफल गुगल विज्ञापन विज्ञापनदाताहरु लगातार विस्तार र बढ्न र आफ्नो पीपीसी कीवर्ड सूची परिष्कृत गर्दछ।
यदि तपाइँको ती विज्ञापनदाताहरु मध्ये एक हो कि किवर्ड अनुसन्धान मात्र एक पटक आफ्नो पहिलो अभियान को शुरुवात मा, तपाइँ सम्भवतः सयौं हजारौं हराएको छु बहुमूल्य, लामो-पुच्छ, कम लागत, र अत्यधिक प्रासंगिक कीवर्ड जसले तपाइँको विज्ञापन बनाउन सक्छ। अभियान एक ठूलो सफलता।
क्षेत्रहरू पीपीसी कुञ्जी शब्दहरूको छनौट गर्दा हेर्नका लागि:
प्रासंगिकता: तपाईंको कुञ्जी शव्दहरू पूर्ण रूपले बेकार हुनेछ यदि तिनीहरू तपाईंको व्यवसाय र तपाईंले प्रदान गरेको सेवाहरूसँग सम्बन्धित छैनन्। तपाइँ खोजशब्दहरूको लागि भुक्तान गर्न चाहनुहुन्न जुन वेब ट्राफिकलाई आकर्षित गर्दछ जुन तपाइँको व्यवसायसँग केहि गर्न चाहन्न, के तपाइँ गर्नुहुन्छ? कुञ्जी शब्दहरू छनौट गर्दा तपाईले कुञ्जी शब्द वा वाक्यांशहरूको लागि जानु पर्छ जुन उच्च पीपीसी क्लिक-थ्रु दर, क्लिक प्रति प्रभावी लागत, र नाफा बढाउनेमा पुर्‍याउँछ। यसको मतलब तपाईले खोज्नु भएको कुञ्जी शब्दहरूले तपाइँको व्यवसाय र सेवाहरू बेच्न को लागी झल्काउनु पर्छ।
थकाऊ: तपाइँको कुञ्जीशब्द अनुसन्धानले तपाइँको कोठामा केवल प्राय: खोजी गरिएका शब्दहरू मात्रै लामो पुच्छर खोजशब्दहरू समावेश गर्नुपर्दछ। यद्यपि लामो-पुच्छ खोजशब्दहरू अधिक विशिष्ट र कम सामान्य छन्, तिनीहरू प्रायः खोज-संचालित यातायात साइटहरूमा प्रवाहको लागि जिम्मेवार छन्। तिनीहरू पनि कम प्रतिस्पर्धी र कम खर्चिलो छन्।
विस्तार: सुधार गर्न को लागी पनि। एक वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् जहाँ तपाइँको कीवर्ड सूची लगातार बढ्न र तपाइँको लक्षित श्रोताको परिवर्तनकारी मागहरु लाई अनुकूलन गर्न सक्छ।
तपाईंको पीपीसी अभियानहरू प्रबन्ध गर्दै
तपाइँको पीपीसी अभियान सिर्जना गरेपछि, तपाइँ यसलाई मुनि मुनाफा प्राप्त गर्न को लागी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईं सफल हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो अभियानको प्रदर्शनलाई निरन्तर अनुगमन गर्न आवश्यक पर्दछ र आवश्यक परिवर्तनहरू गर्न आवश्यक पर्दछ जब परिस्थितिहरूले यसलाई सफल अभियानको लागि कल गर्दछ। यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईले आफ्नो अभियानको प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ।
पीपीसी कीवर्डहरू थप्नुहोस्: तपाईले सँधै कुञ्जी शब्द र कुञ्जी वाक्यांशहरू थप्न, हटाउन र परिमार्जन गर्नुपर्दछ तपाईको अभियानमा प्रयोग गर्नुहुने। यद्पि यो उत्तम हुन्छ यदि तपाईले खोजशब्द हटाउनु भयो र त्यसलाई बदल्नु भएमा अन्य कुञ्जी शब्दहरु जुन ट्राफिक बढाउनेछ र तपाईको विज्ञापनमा क्लिक गर्ने संख्या घटाउँदैन।
नकारात्मक कीवर्डहरू समावेश गर्नुहोस्: नकारात्मक रूपान्तरण सर्तहरू नकारात्मक कुञ्जी शव्दहरूमा थप्नुहोस् यो अभियान प्रासंगिकता सुधार गर्न र व्यर्थ खर्च कम गर्न हो।
विभाजन विज्ञापन समूह: जब तपाईं आफ्नो विज्ञापन समूहहरू विभाजित गर्नुहुन्छ, तपाईं क्लिक-थ्रू रेट (CTR) र गुण स्कोर सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई अधिक लक्षित विज्ञापन पाठ र ल्यान्डि pages पृष्ठहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
महँगो पीपीसी कीवर्ड समीक्षा गर्नुहोस्: समीक्षा किवर्डहरू जुन महँगो र कम-प्रदर्शन गरिएको छ र तिनीहरूलाई आवश्यक भएमा बन्द गर्नुहोस्।